၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ မဟာဌာနဖြစ်သော တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ပညာမဟာဌာနအမည်ဖြင့် စတင်တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ဆေးကုသရေးတက္ကသိုလ်အဖြစ် တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး အင်းစိန်မြို့နယ်ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မှ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ရေဆင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနယခု မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မတိုင်မီက ၆ နှစ်သင်တန်း ကာလဖြစ်ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ၅ နှစ်သင်တန်းသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ဆေးကုသရေး တက္ကသိုလ်မှ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် အဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်အား ပါမောက္ခချုပ်ရုံးနှင့် ဌာနခွဲ ၁၈ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
2.1. လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပါမောက္ခချုပ်ရုံး
2.2. လုပ်ငန်းတာဝန်များ အင်္ဂလိပ်စာဌာန
2.3. လုပ်ငန်းတာဝန်များ သင်္ချာဌာန
2.4. လုပ်ငန်းတာဝန်များ ရူပဗေဒဌာန
2.5. လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဓာတုဗေဒဌာန
2.6. လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ္တဗေဒဌာန
2.7. လုပ်ငန်းတာဝန်များ ရုက္ခဗေဒဌာန
2.8. လုပ်ငန်းတာဝန်များ ခန္ဓာဗေဒဌာန
မွေးမြူရေး ခန္ဓာဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ရှုထောင့် သို့ ၎င်းဘာသာရပ်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် စည်းမျဉ်းဥပဒေသများနှင့် ပတ်သက်သည့် ခေတ်မီ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
2.9. လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် ဇီဝဓါတုဗေဒဌာန
အရည်အချင်းပြည့်ဝသော မွေးမြူဆေးကု တိရစ္ဆာန် ဆရာဝန်များ ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဒုတိယနှစ်၌ စာသင်ကြားနေသော ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းသားများအား အခြေခံ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် ဇီဝဓါတုဗေဒ ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချခြင်း၊
မွေးမြူသူများ အသုံးပြုသော အစာများကို လေ့လာခြင်း စားမြုံ့ပြန် သတ္တဝါများအတွက် အစာဖော်မြူလာများ ပြုလုပ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
မွေးမြူသူ ပြည်သူများအား မေးမြန်း၍ တိရစ္ဆာန်အာဟာရများ လေ့လာ သုတေသန ပြလုပ်ခြင်း သကာတုံးအသုံးပြုမှု၊ နေရာဒေသကိုလိုက်၍ ကျွေးလေ့ရှိသော တိရစ္ဆာန်အစာများ၏ အာဟာရကို လေ့လာခြင်း
2.10. လုပ်ငန်းတာဝန်များ ရောဂါဗေဒနှင့် အဏုဇီဝဗေဒဌာန
"Histopathological Changes of Adrenal Gland, Thyroid Gland, Lymph Nodes and Thymus in Hyperimmunized Horses Experimentally Induced with Viper Venom, Cobra Venom and Tetanus Toxin"ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တိရစ္ဆာန်မဟာဆေးသိပ္ပံဘွဲ့ ရောဂါဗေဒဘာသာရပ် အထူးပြု အတွက် သုတေသနလုပ်ငန်း။
"Study on the Gross and Histopathological Lesions of Kidneys, Liver, Spleen, Lungs, Heart and Lymph Nodes in Antivenom Producing Sheep Hyperimmunized with Viper Venom" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တိရစ္ဆာန်မဟာဆေးသိပ္ပံဘွဲ့ ရောဂါဗေဒဘာသာရပ် အထူးပြုအတွက် သုတေသန လုပ်ငန်း။
"Isolation, Identification and Plasmid Profile of E. coli O157 isolated from Cattle" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တိရစ္ဆာန်ဆေးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့ အဏုဇီဝ ဗေဒဘာသာရပ်အထူးပြု အတွက် သုတေသနလုပ်ငန်း။
2.11. လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆေးဝါးဗေဒနှင့် ကပ်ပါးဗေဒဌာန
2.12. လုပ်ငန်းတာဝန်များ ခွဲစိတ်ကုနှင့် မျိုးပွားပညာဌာန
2.13. လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆေးပညာဌာန
2.14. လုပ်ငန်းတာဝန်များ မွေးမြူရေးပညာဌာန
နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ဝက်မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးပညာ၊ ကြက်မွေးမြူ ထုတ်လုပ်ရေးပညာ မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန် အထူးပြု နှင့် တောရိုင်း၊ ရေနေနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အထူးပြု၊ စားမြုံပြန်တိရစ္ဆာန် မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးပညာ မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်အထူးပြု နှင့် တောရိုင်း၊ရေနေ နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် အထူးပြု မွေးမြူရေးဘောဂဗေဒနှင့် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ လူထုပညာပေးရေး ပညာဘာသာရပ်များအား သင်ကြားပေးခြင်း၊
အသားစားဘဲမျိုးအစာတွင် အသုံးပြုသော နှမ်းဖတ်နေရာ၌ ဘဲစာမှော်Duckweedအား အချိုးအစား အမျိုးမျိုးဖြင့် အစားထိုး စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်း၊
2.15. လုပ်ငန်းတာဝန်များ စာကြည့်တိုက်ဌာန
2.16. လုပ်ငန်းတာဝန်များ ငွေစာရင်းဌာန
2.17. လုပ်ငန်းတာဝန်များ ကျောင်းသားရေးရာဌာန
2.18. လုပ်ငန်းတာဝန်များ အင်ဂျင်နီယာဌာန
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်ရေဆင်းတွင် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအား ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မဟာဒဿနဘွဲ့ နှင့် တိရစ္ဆာန်မဟာဆေးသိပ္ပံဘွဲ့များ အပ်နှင်းခဲ့သည်။ ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကျင်းပခဲ့ပြီး ရေးဖြေနှင့် နှုတ်ဖြေ စာမေးပွဲအား ဖြေဆိုရသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ ဘွဲ့ရရှိသူ ၄၄၀၉ ဦးရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အပ်နှင်းသောဘွဲ့များမှာ တိရစ္ဆာန်ဆေးသိပ္ပံဘွဲ့BVS, BVSc၊ Dip. LISဘွဲ့၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာ မဟာဒဿနဘွဲ့ MPhil၊ တိရစ္ဆာန်မဟာဆေးသိပ္ပံဘွဲ့ MVSc နှင့် ပါရဂူဘွဲ့PhD ဘွဲ့များဖြစ်ကြသည်။
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်ရေဆင်း၏ တွစ်တာစာမျက်နှာ
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်ရေဆင်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်ရေဆင်း၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ